Iintlungu eziNgasemva eziNgapheliyo: Unyango oluNtsha olutsha lweNyinene yokuqala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iintlungu eziNgasemva eziNgapheliyo: Unyango oluNtsha olutsha lweNyinene yokuqala
I-AppliedVR, uvulindlela oqhubela phambili kwisizukulwana esilandelayo sonyango lokuntywiliselwa, namhlanje ubhengeze ukuba i-US Food and Drug Administration (FDA) inike imvume ye-novo ye-flagship yayo yonyango yokuntywila, i-EaseVRx, ukunyanga iintlungu ezingapheliyo ezisezantsi, ezazifumene ukutyunjwa kwesixhobo. in 2020. Iindaba nazo ziza kwizithende ze-AppliedVR ibhengeza i-$ 36 yezigidi ze-series B yenkxaso-mali ngeenxa zonke, izisa imali yayo yonke kwi-71 yezigidi zeedola.
I-EaseVRx sisixhobo sonyango esisetyenziswa ngugqirha esinomxholo wesoftware elayishwe ngaphambili kwiqonga le-hardware lobunikazi elinikezela ngoqeqesho lokulawula iintlungu ezisekelwe kwizakhono zokuziphatha kwengqondo kunye nezinye iindlela zokuziphatha. Isebenzisa inkqubo ye-immersive virtual reality (VR) ehambisa umxholo we-VR ngelixa ibandakanya imfundo yeentlungu ze-biopsychosocial, uqeqesho lokuphefumla kwe-diaphragmatic, ukuzivocavoca kwengqondo, ukuzivocavoca-impendulo yokuphumla kunye nemidlalo yokusebenza yesigqeba.
Umxholo wesoftware we-EaseVRx uquka iiveki ezisibhozo, inkqubo esekwe kwiVR enceda abantu banciphise ubunzima beempawu kunye nefuthe lentlungu yabo. Abantu abaneentlungu ezingapheliyo ezibuhlungu balandela inkqubo eqinisekisiweyo yeklinikhi, esekelwe kubungqina bokuphuhlisa izakhono zokumelana ngelixa bedala imikhwa emitsha, eluncedo enokunciphisa intlungu kunye nokuphazamiseka kwentlungu.
"Imvume ye-FDA yanamhlanje iphawula usuku olubalulekileyo lwe-AppliedVR, kwicandelo lonyango lokuntywila kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kwabo bantu banentlungu engapheliyo yomqolo," utshilo uMatthew Stoudt, umseki kunye ne-CEO ye-AppliedVR. "Iintlungu ezingapheliyo ezingasemva zinokuba yingxaki kwaye ibe yingxaki enexabiso elimangalisayo, kodwa ngoku sisondele ekufezekiseni injongo yethu yokwenza unyango oluntywilayo lube ngumgangatho wokhathalelo lwentlungu."
Ukungeniswa kwe-FDA ye-AppliedVR kwaxhaswa yizilingo ezimbini ezilawulwa ngokungahleliwe (RCTs), ukuvavanya ukuphumelela kwenkqubo esekelwe kwi-VR yonyango oluzimeleyo lwentlungu engapheliyo ekhaya. Zomibini izifundo zagqiba ukuba inkqubo yonyango ye-VR elawulwayo, esekelwe kwizakhono yayingeyona nje indlela enokwenzeka kwaye enobungozi yokunyanga intlungu engapheliyo, yayisebenza kakuhle ekuphuculeni iziphumo ezininzi zentlungu engapheliyo.
Uphononongo lokuqala, olupapashwe kwi-JMIR Formative Research, luhlalutye idatha evela kubantu abaphethwe yintlungu engapheliyo okanye i-fibromyalgia ngexesha leentsuku ze-21. Abathathi-nxaxheba abasebenzisa i-EaseVRx banciphisa kakhulu iimpawu ezihlanu zeentlungu ezingundoqo - nganye yazo idibene okanye yadlula i-30-pesenti yepesenti yentsingiselo yekliniki.
Kwi-RCT yayo ebalulekileyo efunda ukhuseleko kunye nokusebenza kwe-EaseVRx kwiiveki ezisibhozo, abathathi-nxaxheba kwiqela le-EaseVRx ngokomndilili baxele uphuculo olukhulu emva kokunyanga, kubandakanywa nokunciphisa i-42% kwintlungu ebuhlungu; I-49% yokunciphisa ukuphazamiseka komsebenzi; I-52% yokunciphisa ukuphazamiseka kokulala; I-56% yokunciphisa ukuphazamiseka kwemizwelo; kunye nokunciphisa i-57% yokuphazamiseka koxinzelelo.
Idatha yokuzibandakanya kunye nokusebenziseka ibalulekile kubaboneleli kunye nabahlawulayo ekufuneka bavavanye ukuba kunokwenzeka ukuba amalungu / izigulane ziya kusebenzisa unyango lwedijithali - ngakumbi ngokwabo ngaphandle kwezicwangciso zeklinikhi. Kuphononongo olubalulekileyo, abathathi-nxaxheba be-EaseVRx babonise ukubandakanyeka okuphezulu kunye nomyinge wokugqitywa kweeseshoni ze-5.4 ngeveki kwaye babonise ukwaneliseka ngokulula kokusetyenziswa kwiSikali sokuSebenza kweNkqubo (ukulinganisa isixhobo kulula ukusisebenzisa kune-ATM kunye neenkonzo ze-imeyile eziphezulu).
"Sisebenze ngokuzikhandlayo kule minyaka imbalwa idlulileyo ukwakha ubungqina obungadibaniyo nobungqina bekliniki obubonisa amandla e-VR kunyango lweentlungu, kwaye asinakuvuya ngakumbi ukuphumeza eli nqanaba libalulekileyo," utshilo uJosh Sackman, iAppliedVR co- umseki kunye nomongameli. “Kodwa, uthumo lwethu alupheli ngale mvume inye. Sizimisele ukuqhubeka nophando oluqinisekisa ukusebenza ngempumelelo kwethu kunye neendleko zokunyanga iintlungu ezingapheliyo kunye nezinye iimpawu. "
Intlungu ephantsi yomqolo yenye yezona meko zixhaphakileyo ezingapheliyo abantu abajongana nazo kwihlabathi liphela kwaye imele esinye sezizathu eziphezulu zokuba kutheni abantu bephuthelwa ngumsebenzi. Ukongeza, yingxaki ebiza kakhulu kwiinshurensi njengoko uninzi lujonge ukunciphisa iindleko ezinxulumene noqhaqho lwasemva. Uphando olutshanje lubonise ukuba, xa kudibaniswa neentlungu zentamo, iintlungu ezisezantsi zibiza malunga ne-$ 77 yezigidigidi kwi-inshurensi yangasese, i-$ 45 yezigidigidi kwi-inshurensi yoluntu, kunye ne-$ 12 yezigidigidi kwiindleko eziphuma kwi-pocket kwizigulane.
Iintlungu ezingapheliyo, ngokubanzi, zibiza kwaye zinegalelo kwezinye iingxaki zempilo, kubandakanywa ubhubhane lwe-opioid. Uphononongo lwangaphambili lukaJohns Hopkins kwi-Journal of Pain lufumene ukuba intlungu engapheliyo inokunyusa i-635 yeebhiliyoni zeedola ngonyaka - ngaphezu kweendleko zonyaka zomhlaza, isifo senhliziyo kunye nesifo sikashukela zidibene.
"Intlungu idla ngokuphathwa ngendlela ecocekileyo ye-biomedical kunye neenkalo eziphambili zeentlungu ezishiywe zingaphathwanga," kusho uDkt Beth Darnall, umcebisi oyintloko wesayensi ye-AppliedVR kunye nososayensi weentlungu zaseStanford. "Uphando lwethu lubonisa ukuba i-VR inokunyusa ukhathalelo olusebenzayo 'lomntu wonke' kwiintlungu ezingapheliyo ezinokuthi zisetyenziswe ngokulula kumakhaya abo. Njengenkokeli yecandelo lonyango lokuntywila, iAppliedVR ngoku ikwindawo entle yokuqhubela phambili utshintsho oluya kukhathalelo lwentlungu olufikelelekayo. ”
Ukulandela imvume yayo yokuqala ye-FDA, i-AppliedVR iceba ukuqhubeka nokuvavanya ukubonisa ukusebenza kweklinikhi kunye nokuphumelela kweendleko zokusebenzisa i-VR ukunyanga iintlungu, ngokugqithiseleyo ukugqiba izifundo ezininzi zezoqoqosho zempilo kunye neziphumo (HEOR) kunye nabahlawuli bezorhwebo. I-AppliedVR ikwangoku isebenzisana ne-Geisinger kunye neKliniki yaseCleveland ukuqhubela phambili ulingo lweklinikhi olwahlukileyo oluxhaswa yi-NIDA oluvavanya i-VR njengesixhobo sokusindisa i-opioid kwiintlungu ezibukhali nezingapheliyo.
I-AppliedVR sele ithenjwe ngaphezulu kwe-200 yeenkqubo zempilo eziphambili zehlabathi. Iteknoloji isetyenziswe malunga nezigulane ze-60,000 ukuza kuthi ga ngoku ekulawuleni iintlungu kunye neenkqubo zempilo.